Kutheni Umphefumlo Ongalindelekanga? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Indoda yaseMntla Melika, enqwenela ukungazichazi igama, esiza kuthi nguWalter, wayekhe wangxola, waqhayisa, wahlekisa ngenkolo yamaKatolika, wade wayikrazula iirosari zikanina ezandleni zakhe zokuthandaza, wabachithachitha ngaphaya komgangatho. Emva koko wahamba ngenguquko enzulu.
Ngenye imini, umhlobo wakhe owayesebenza kunye naye, uAaron, owayesandula ukuguqulwa eMedjugorje, wanika uWalter incwadi yemiyalezo kaMary's Medjugorje. Ukuthabatha nabo ukuya kwiCathedral yeSigramente Esikelelweyo ngexesha lesidlo sasemini emsebenzini wakhe njengomrhwebi wezindlu, wayidla imiyalezo kwaye ngokukhawuleza waba yindoda eyahlukileyo.
“Kulungile, Walter,” uphendule watsho u-Aaron, “kodwa ngo-9 kusasa, kwaye sinomsebenzi ekufuneka siwenzile. Singathetha ngawo kamva.”
Lwaqala ke ukonwabisa kunye noThixo kunye neNkosikazi yethu uWalter awayengenakuphupha ngayo. Ngelixa uWalter wayeqhuba egoduka evela emsebenzini ngenye imini, uvakalelo olunamandla esifubeni sakhe, njengesitshisa esingakhange sibuhlungu, ngequbuliso samoyisa. Yayiyimvakalelo yolonwabo eyomelele kangangokuba wayezibuza ukuba angaba nesifo sentliziyo na, ke ngoko washenxisa uhola wendlela. Emva koko weva ilizwi ekholelwa ukuba nguThixo uBawo: “Umama osikelelweyo ukhethe wena ukuba usetyenziswe njengesixhobo sikaThixo. Iya kukuzisela izilingo ezinkulu kunye nokubandezeleka okukhulu. Ngaba ukulungele ukuyamkela le nto? ” UWalter wayengazi ukuba ithetha ukuthini le nto- kuphela kokuba wayecelwa ukuba asetyenziswe njengesixhobo sikaThixo. UWalter wavuma.
Ngoku le miyalezo ikhuthaza, imilo, icelomngeni, kwaye yomeleza intsalela ethembekileyo yala maxesha, amaxesha okugqibela, iyafumaneka kwihlabathi. Ngokudibeneyo, ziyafumaneka encwadini: Lowo Ubonisa iNdlela: Imiyalezo yaseZulwini yeXesha lethu leNzondelelo. Imiyalezo, ethe yaphicothwa kakuhle ngabefundisi abaninzi yafunyanwa ingenazimpazamo kwiimfundiso, yamkelwa ngu-Archbishop Emeritus Ramón C. Argüelles waseLipa.
Imiyalezo evela kumphefumlo ongalindelekanga
Umphefumlo Ongathandekiyo -Izixhobo zakho eziphambili ngokuchasene nedemon yekratshi
Ndiyaniphulula, kwaye ndithandaza kuThixo ngeyona nto ilungele imiphefumlo yenu.
Indawo eNkulu yokuTshintsha kwiSiphelo seLizwe lakho
Ukuhlawula amatyala ziintyatyambo ezincinci zothando.
Kutheni Edson Glauber? →